IMacBook ngaphandle kwekhibhodi inelungelo elilodwa lomenzi ngu-Apple | Ndisuka mac
IMacBook ngaphandle kwekhibhodi inelungelo elilodwa lomenzi yi-Apple
Yonke into iyabuya. "Ikhompyuter" yokuqala edlulise izandla zam yayiyi-Sinclair ZX81. Umntu asebenza naye kweli ziko wamthengela. Njengoko isilele kugcino, ukuba sifuna "ukudlala" into, kufuneka siqale ngokuchwetheza yonke imiyalelo yomdlalo kwiSiseko. Umhlobo wam wandixelela, ethatha amaphephancwadi aphuma kanye ngenyanga awayepapashwa ngelo xesha, ndaza ndawachwetheza. Siza kudlala ngezo pixels ezinkulu zimnyama namhlophe okwethutyana, kwaye ngosuku olulandelayo, siqale phantsi.
Le "vintage" vibe ilungile kuba ithe i-ZX81 yayinebhodi yezitshixo "engenanto". Yayiyimbumba yeplastiki enye egudileyo enamaqhosha aprintwe kwiscreen, ekufuneka ucofe kuwo ukuze unxibelelane nesekethe eprintiweyo ehamba ngaphantsi. Njengalezo zixhobo zokubala zeCasio "zekhadi letyala". Ngoku iApple inelungelo elilodwa lomenzi weMacBook ngaphandle kwezitshixo, njengekhompyuter eyenziwe nguClive Sinclair. Yonke into iyabuya.
I-Apple inikwe elinye ilungelo lobunikazi elinxulumene neMacBook. Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ndathumela enye iindaba kwelinye ilungelo elilodwa lomenzi elichaza umbono we-MacBook enemimandla ye-haptic kwimeko endaweni ye-trackpad. Ngeli thuba ipatent entsha enikwe nge-Matshi 30, 2021 ibonakala ngathi ayiphelisi kuphela i-trackpad, kodwa ikhibhodi epheleleyo.
Le patent intsha inesihloko esithi "uqwalaselo olunokuqwalaselwa lolwakhiwo lwegalelo lwezixhobo ze-elektroniki". Uluvo kukuphepha ingxaki kwiikhibhodi ezenziwa ngoomatshini, njengoko iApple izamile ngengxaki yebhodi yamabhabhathane enengxaki yokuba nesiphene ngamanye amaxesha xa uthuli nomhlaba ziqokelelwe phantsi kwezitshixo.
Indawo enye enokumaneka ngokulula
Umfanekiso obonisa ngokucacileyo umbono welungelo elilodwa lomenzi.
Kule patent, indawo yokufaka, apho ikhibhodi yeelaptop kunye ne-trackpad zihlala zibekwe khona, yindawo enye enxibelelana nesinyithi. Ngaphantsi komphezulu kukho izaleko ezibini ezakhelwe kuzo ulawulo lwegalelo.
Umaleko onikezela ngoxinzelelo unokunika ingxelo yegalelo lomsebenzisi kunye nemingxunya emincinci eguquguqukayo kumphezulu wesinyithi unokuvumela amaqhosha okanye imiphetho ukuba ibonakalise kwaye ifake izicwangciso ezahlukeneyo.
Kuyathakazelisa ukuba, ngokwe-patent, umsebenzisi unokumisela indawo yokungena ngokwakhe. Ke endaweni yekhibhodi yekwerty, umphezulu uphela unokusetyenziswa njenge ikhiphedi yenombolo, okanye iphedi yokulandela umkhondo enye, umzekelo.
Siza kubona ukuba ngenye imini le ngcamango sele inelungelo elilodwa lomenzi-nto iya kuba yinto yokwenyani, okanye iya kuhlala ifayilishwe njengelungelo elilodwa lomenzi wechiza ngaphezu kwamakhulu aseleyo asele kwiingcinga neeprojekthi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IMacBook ngaphandle kwekhibhodi inelungelo elilodwa lomenzi yi-Apple